Dowladda Qadar oo shaacisay inay ciidankeeda kala baxday xuduuda Jabuuti iyo Eritrea (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Dowladda Qadar oo shaacisay inay ciidankeeda kala baxday xuduuda Jabuuti iyo Eritrea (SAWIRO)
Dowladda Qadar ayaa shaaca ka qaaday inay ciidamadeeda kala baxday xuduuda u dhaxeeysa dalalka Jabuuti iyo Eritrea, halkaas oo ay ciidankeeda in muddo ah kaga sugnaayeen.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Qadar oo ka gaabsatay inay si faah faahin dheeraad ah ka bixiso sababta rasmiga ah ee keentay in ciidankeeda ay la baxdo ayaa sheegtay inay dowladda Jabuuti ay ku wargelisay inay ciidankeeda la baxeeyso.
Illaa iyo haatan lama oga tiradda rasmiga ah ay gaarayaan ciidankaasi, balse warar soo baxaya ayaa sheegaya in go’aanka dowladda Qadar ay ciidankeeda uga saartay xuduuda Jabuuti iyo Eritrea ay ka dambeysay kadib markii labadaasi dal ay la safteen dalalka Sucuudiga iyo Imaaraadka Carabta oo khilaaf diblomaasiyadeed soo kala dhex-galay.
Dalalka Jabuuti iyo Eritrea ayaa hore dagaal ugu dhex maray xuduuda ay labadooda dal wadaagaan, waxayna haatan hoos u dhigeen xiriirka ay la leeyihiin dalka Qadar.
Sanadkii 2010-ka ayay ahayd markii dowladda Qadar ay waan-waan kala dhex dhigtay dalalka Jabuuti iyo Eritrea, kadib markii ciidamo ka kala tirsan labadaasi dal uu dagaal culus ku dhex maray xuduuda ay wadaagaan labadaasi dal.